इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएमा इरानलाई केके फाइदा हुन्छ ?
इराकका प्रधानमन्त्री अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनसँग चर्चाका लागि ह्वाइट हाउस पुगेका छन् ।
यसैबीच अमेरिकाले इराकबाट सबै अमेरिकी सैन्यबल फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिका इराक रणनीतिक वार्ताअन्तर्गत यस वर्षको अन्त्यसम्ममा इराकका सबै सैनिकलाई फिर्ता बोलाइने अमेरिकाको भनाइ छ ।
यस घोषणाले दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ । यसले इराकको धरातलीय यथार्थमा कस्तो असर पार्नेछ ? यसले इराकमा इस्लामिक स्टेट फिर्ता हुने अवस्था आउला ?
केही वर्षअघि इस्लामिक स्टेटले पश्चिम एसिया र लिभान्टमा आतंक मच्चाएको थियो । यस उग्रवादी संगठनमा विश्वका विभिन्न भागका मुसलमानहरू गएर जोडिएका थिए ।
इराकमा अमेरिकाले आक्रमण गरेको १८ वर्षपछि अहिले त्यहाँ जम्मा २५ सय सैनिक छन् । त्यसबाहेक इस्लामिक स्टेटसँग लड्ने विशेष सैन्य दस्ताको एक सानो गोप्य टुकडी छ । त्यसको जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।
इराकमा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाका एक लाख ६० हजार सैनिकहरूले कब्जा जमाएका थिए । अहिले तीमध्ये २५ सय मात्र सैनिक छन् र तीनवटा अड्डामा सीमित छन् । तिनीहरूमाथि इरानसमर्थित मिलिसियाले रकेट र ड्रोनमार्फत आक्रमण गरिरहन्छन् ।
अहिले इराकमा रहेका अमेरिकी सैनिकहरूले इराकी सैन्यबललाई प्रशिक्षित गर्छन् । इराकी सैनिकहरू देशमा इस्लामिक स्टेट जिहादीहरूविरुद्ध लडिरहेका छन् ।
इरानसमर्थित नेता र मिलिसियाहरू अमेरिकीलाई इराकबाहिर गएको देख्न चाहन्छन् । विशेषगरी इरानको रिभोल्युसनरी गार्डको कुद्स फोर्सका प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी र शीर्ष शिया मिलिसिया कमान्डरलाई बग्दाद विमानस्थलमा अमेरिकाले हत्या गरेपछि इरानीहरूमा यो भावना प्रबल बनेको हो ।
इराकमा तटस्थ व्यक्तिहरू पनि विदेशी सैनिक हटेको हेर्न चाहन्छन् किनकि यसमा भावना पनि जोडिएको छ ।
अमेरिकामा पनि धेरैजना इराकबाट सैनिक फिर्ता ल्याउने विषयमा सहज अनुभव गर्छन् । तर यसो गर्दा इराक इरानको नियन्त्रणमा पुग्ने डर उनीहरूलाई छ ।
अमेरिकाले लामो समयदेखि आफूलाई पश्चिम एसियाबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
अफगानिस्तानबाट पनि अमेरिका द्रुत गतिमा निस्किरहेको छ । अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकहरू एसिया प्रशान्त क्षेत्र र दक्षिण चीन सागरमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । त्यहाँ चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने उनीहरूको ध्येय हो ।
अमेरिका इराकबाट फर्किंदै गर्दा त्यहाँ इस्लामिक स्टेट पुनः उदय हुने जोखिम छ ।
तर इस्लामिक स्टेटको हारपछि अमेरिका र बेलायतले इराकी सैन्यबलहरूलाई प्रशिक्षण दिन समय र प्रयास खर्च गरेका छन् । नेटोको समर्थनमा इराकी सैन्य बलहरूको प्रशिक्षण जारी रहनेछ । अहिले उग्रवादीहरूको सामना गर्न इराकी सैन्यबल पहिलाभन्दा बढी तयार छ ।
त्यसैले गर्दा पनि इस्लामिक स्टेटका नेताहरू अफ्रिका र अफगानिस्तानमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । उनीहरू सरकारको कमजोर उपस्थिति भएको ठाउँमा नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छन् । अरब देशहरूमा प्रशिक्षित र हतियारबाट सुसज्जित सैन्यबलसँग लड्नुको साटो उनीहरू कमजोर शान्तिव्यवस्था भएको मुलुकमा आकर्षित भइरहेका छन् ।
इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीजमा आबद्ध बेलायती सेनाका पूर्व अधिकारी ब्रिगेडियर बेन ब्यारीका अनुसार, इराकी सैन्यबल इस्लामिक स्टेटको आक्रमण रोक्न समर्थ छ ।
तर इराकमा सुन्नीहरूको राजनीतिक समस्या समाधान नभएमा हिंसाको मूल कारण जीवित रहनेछ ।
इराकको परिस्थितिको दूरगामी परिणाम इरानका लागि फाइदाजनक छ ।
सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि नै इरानले आफूवरपरका मुलुकहरूबाट अमेरिकी सैनिकहरूलाई हटाएर क्षेत्रको महाशक्ति बन्ने सपना पालेको छ ।
इरानलाई खाडीका अरब देशहरूमा केही सफलता प्राप्त भएको छ । त्यहाँ कम्तीमा ६ देशमा अमेरिकी सैनिकहरूको उपस्थिति छ र अमेरिकी जलसेनाको फिफ्थ फुलीटको केन्द्रीय कार्यालय बहराइनमा छ ।
सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकको सत्ताबाट सुद्दाम हुसैनलाई अपदस्थ गरेपछि इरानको सबभन्दा ठूलो अवरोधक पन्छिएको थियो । त्यसपछि नै इरानले सत्ता र शक्तिको विस्तार गरिरहेको छ ।
इरानले इराकको सेनामा आफ्ना समर्थक शिया लडाकूहरूलाई भर्ती गरेको छ । इराकी संसदमा पनि इरानसमर्थकहरू छन् । इरानका समर्थकहरूले इराकी संसदमा सशक्त आवाज राख्ने गरेका छन् ।
सिरियामा चलिरहेको गृहयुद्धमा पनि इरानले सैन्य उपस्थिति बढाउने मौका पाएको छ । छिमेकी मुलुक लेबनानमा इरानसमर्थित हिज्बुल्लाह सबभन्दा ठूलो शक्ति बनेको छ ।
इरानले लामो खेल खेलिरहेको छ । पश्चिम एसियामा खुला र आन्तरिक दबाबको रणनीतिमा काम गरिरहेमा अमेरिकी सेना सक्रिय नरहने सोच इरानी नेताहरूमा छ ।
इरानसमर्थित मिलिसियाले अमेरिकी सैन्य अड्डामा लगातार रकेट आक्रमण गर्ने गरेका छन् । इरानले आफ्ना नागरिकलाई पनि अमेरिकी सैनिकको उपस्थितिविरुद्ध प्रदर्शन गर्न प्रेरित गर्ने गरेको छ ।
इराकबाट अमेरिकी सैनिकहरू फिर्ता जाने निर्णयलाई इरानीहरूले सही कदम मानिरहेका छन् ।
इजरायलका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दागर्दै निदाए बाइड...
फोन चोरेको आरोपमा व्यक्तिलाई बाँधेर तालिबानले गर्‍...